Kubiridzira kadhi rekodhi: vapari vemhosva vanonangawo Steam kiredhiti - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Jan 20, 2022 | nhau, Other, Vhidhiyo mitambo
Kubiridzira nemakadhi ekubhadharwa kweSteam hakusi hutsotsi hutsva, asi nguva nenguva vanhu vanobatwa nevanonyengera vanoda kuzvipfumisa kuburikidza nezvinonzi spoofing. Nokudaro, zvakakosha kupa chiziviso chenhema pafoni - kana ne-e-mail - kuitira kuti uwane ruzivo rwakavanzika. Mukubiridzira kadhi rekodhi, vapari vemhosva vakakwenya macode mumaziso avo, ayo vanobirwa vanopa nerunhare uye vanodzikinura nevapari vemhosva. Dzimwe nguva kukuvara kwakanyanya kwakadaro kunoitika.
Mapurisa anga achiyambira zvisingaite nezvezvinonzi spoofing kwemakore matanhatu. “Apa ndipo pakahwanda matsotsi anoshandisa nhamba dzenhare dzemanyepo kuita kunge munhu asiri wenhema kuti awane ruzivo rwezvakavanzika uye kuzvipfumisa zvisiri pamutemo,” akadaro mapurisa mudunhu reMettmann muna 2015 - panguva iyoyo. chirongwa chaive chitsva. Makore afamba zvino, asi vanyengeri vagara vachibudirira.
Kukuvadzwa kwakanyanya: Mutsotsi anofanirwa kupa Steam makodhi
Chitsotsi chinogara chakafanana: vapari vemhosva vanosangana, vanoteedzera rudzi rwechimbichimbi uye nekudaro vanokurudzira vanobatwa kuti vatenge makadhi ekodhi kuitira kuti vazopa makodhi akakangwa kune vanobiridzira nerunhare kana email. Zviito zvakadaro zvinoitika zvakare uye zvakare muindasitiri yemitambo, pakati pezvimwe zvinhu nekuti makadhi anobhadharwa - akadai sePaysafe, Ukash kana Steam makodhi - akapararira.
Vanobiridzira vanoenderera mberi nekunyengera: Vanotora mukana wekutenda kwakanaka kana pfungwa yebasa revamwe kuti vazvipfumise nenzira iyi. Mushandisi nguva pfupi yadarika akataura nyaya yekubiridzira kwespoofing muforum yemitambo. Mwanasikana akange atora basa idzva, nekuda kwedambudziko reCorona zvese zvakaitwa parunhare kuburikidza nemusangano wevhidhiyo. Kune vanobiridzira iyi yaive nzvimbo yakanaka yekuberekesa chitsotsi: vapari vemhosva vainyepedzera kunge shefu aive mumusangano wakakosha uye aida mavhocha.
Kudzvanyirirwa kwenguva kune rimwe divi uye kukwezva pfungwa yebasa semunhu mutsva kukambani kune rimwe divi zvakakonzera kuti munhu akabatwa aende kuchitoro chiri pedyo, akatenga macode cards ikoko ndokubva atora mifananidzo nhamba dzechikwereti ndokudzitumira vanonzi boss via WhatsApp. Pakupedzisira, pakakuvadzwa kweanenge 1.000 euros.
Vapari vemhosva vane unyengeri hwakadii. muchiitiko ichi chinoratidza chokwadi chekuti panguva ino vakatumira nyajambwa wavo asingafungire kuti atore zvekushandisa muchimiro chemamwe makadhi echikwereti. Baba vacho pavakaona kubiridzira kwacho, kukuvara kwakanga kwaitwa kare.
Mapurisa anogara achikurudzira kungwarira uye kupa zano muzviitiko zvakadaro:
Usatambise mari zvichienderana nekufona
Usagovera chero ruzivo rwemunhu
Ngwarira paunenge uchikurudzira iwe parunhare
Kuendesa mari kunze kwenyika. Nezvo iwe hauna pedyo nemumwe
Mukana wekudzosera mari yako
Gara uchigumisa hurukuro. Anofona ndiwe
zvichida kusundidzira kuti nhaurirano ienderere mberi
kuda. Usapinda mairi
Pakati pezvimwe zvinhu, Google inoyambira nezvehutsotsi hwekadhi rekodhi: "Kana ukakumbirwa kutenga zvinhu kunze kweGoogle Play nekadhi rechipo cheGoogle Play uye woshandisa kodhi kubhadhara, pane mukana wekuti uri kubata netsotsi. "
Boka rinopa mienzaniso miviri kuratidza hutsotsi hunoshandiswa nevanobiridzira:
Mutsotsi anoridza runhare achinyepedzera kunge ari kumiririra sangano rehurumende, e. B. chiremera chemitero. Anoti unomukweretesa mari yemitero, yekubhadhara mari yechibatiso, yokuunganidza zvikwereti, kana chimwe chinhu chipi zvacho. Vanokumbirwawo kubhadhara nemakadhi echipo kuti vadzivise kusungwa kana kusungirirwa kwezvinhu zvenyama kana ruzivo rwako rwunozivikanwa, senge: B. nhamba yekuchengetedzwa kwevanhu.
A scammer anoti ihama iri mudambudziko kana gweta kana mumwe mumiriri wenhengo yemhuri. Anonyepedzera kubhadhara nemakadhi echipo. Vanogonawo kuedza kukudzivirira kuti usabate hama yakafanira kuti iferefete mhosva. Usamutenda. Mumamiriro ezvinhu akadaro, usambotenga makadhi echipo kana kupa makodhi emakadhi echipo.
Kunyangwe vanofungidzirwa kuti vatambi vakavhenekerwa vanogara vachishandisa makadhi ekodhi, vari paInternet zuva rega rega uye vanoramba vachisangana nemisoro yakadai sekubira kana kubiridzira pamhepo, havangodzivirirwe kubva kune hutsotsi hwematsotsi.
Valve inopawo ruzivo nezve kodhi kadhi scams pane yayo rutsigiro peji. Inoti kune "mishumo iri kuwedzera yevanobiridzira vanobata vavanobirira nerunhare uye kuvakurudzira kuti vatenge makadhi eSteam prepaid kuitira kuti vagamuchire mubhadharo wekuunza mari kubva kumakwikwi, kana kupedzwa kwemitero, madhipoziti kana zvikwereti Afford". Makororo aiwanzonyepedzera kuva vashandi vemasangano ehurumende kana kuti zviremera. Vanenge vawirwa nenjodzi vanozokurudzirwa kutenga makadhi eprepaid voendesa kodhi yakakarwa.
Valve inoyambira kuti: “Ndokumbira utarise kuti Steam Prepaid Cards inogona kungoitwa paSteam. Iko kukosha kwemari kwakabatana neizvi kunogona chete kushandiswa kutenga zvigadzirwa zveSteam semitambo yemavhidhiyo, zvinhu zvemutambo, software uye hardware. Kana mumwe munhu akakukumbira kuti ubhadhare mari uchishandisa Steam Prepaid Cards, unogona kunge wakabiridzirwa. " Chinotonyanya kukosha kukwidza kunotevera kweValve: "Ndokumbira usambofa wakapa Steam Prepaid Card kune chero munhu wausingazive."
Vanyajambwa vokubiridzirwa kwakadaro vaigona kuita chiito. Chero ani akatenga kadhi rekubhadhara asi akaona kuburikidza nekubiridzira kare, i.e. haana kupfuudza makodhi, anogona kuidzosera kumutengesi. "Anogona kuongorora makadhi uye kutarisa kana akakodzera kudzorerwa," akadaro Steam. "Kazhinji, Steam prepaid makadhi akavhurwa asi asati adzikinurwa anogona kudzoserwa nemutengesi."
Kana iwe watumira makodhi kune vanobiridzira, Valve inoti iwe unofanirwa kuchengeta Steam kiredhiti makadhi uye risiti uye taura nyaya yacho kumapurisa eko.
Razer Blade 15 Studio Edition - Yemitambo Laptop 15.6 inch (Intel... * tenga
Kare Kukwira kwemitengo yemitengo: Vatambi veGerman vanofanirwa kunetsekana here?
Inotevera WWE 2K22: zuva rekuburitsa uye nyeredzi yekuvhara iri pano
Mitambo yepamhepo muna 2021: mitambo yatinogona kutarisira zvakanyanya
Madden NFL 22: Aya ndiwo mawaniro anoita vateveri muyedzo wemaawa gumi
Ravensburger nekusvetuka mukutengesa: mitambo yekare iri kutengesa mamirioni enguva
Tango - The Adventure Game: Zvese zvakanaka zvinhu zvinotanga mubhawa